Finansinspektionen oo dowladda ugu baaqdey in ay soo farogeliso arrimaha xawilaadaha - Radio Sweden Somali - Raadiyaha Iswiidhen | Sveriges Radio
Finansinspektionen oo dowladda ugu baaqdey in ay soo farogeliso arrimaha xawilaadaha
FI: waa masuuliyadda banggiyada in ay digtoonaadaan
La daabacay fredag 23 januari 2015 kl 14.34
Hey’adda Kormeerka Dhaqaalaha Finansinspektionen ayaa sheegtay in ay xukumadda dalka u jeediyeen sidii xal loogu heli lahaa looguna sahli lahaa lacagaha ay qurbojoogta dib ugu diran qaraabadooda, islamarkaana loo hubin lahaa in bangiyada Sweden aan loo adeegsaan maalgelinta argagaxisada.
Hey'adda ayaa sidoo kale wakiilan doonta macadda Försvarhögskolan si baaritaan ugu sameeyaan arrinkaan, tallana uga keenaan si loo hubiyo inaan lacagaha la diro loo adeegsan maalgelinta argagaxisada.
Koontooyin la xirtay
Todobaadkii hore ayey aheyd markii Radio Sweden tabiyey in xawilaado badan oo soomaaliya lacag u xawila ay bangiyada qaarkood ka xirteen koontooyinka. Shirkadaha laga xirtay kontooyinka ayaa ka heysta ruqsad ay lacago ku diraan hey'adda Finansinspektionen oo ayada masuul ka ah sharuucda dalka in ay raacaan shirkadaha ganacsiga iyo dhaqaaalaha.
Cecilia Ekenbäck waa madaxa laanta ka hortaga lacagaha suuqa madow ee hey’adda Finansinspektionen. Waxay noo sheegtay mar aan telefon kula xiriirnay in bangiyada iyo shirkadaha dhaqaale ee Sweden saarantahay masuuliyadda ah in aan loo adeegsan maagelinta argagaxisada. Tillaabada ay bangiyada qaarkood kontooyinka uga xirteen xawaaladaha ay tahay mid ay taas ku hubinayaan.
"Bangiyada iyo dhamaan shirkadaha kale ee dhaqaalaha waxaa saaran masuuliyad ah in aan loo adeegsan lacagaha suuqa madow iyo maagelinta argagaxisada. Howlsha taas looga hortagi karaa waxay noqon kartaa in bangiyada dib u fiiriyaan xiirka ay macaamiishooda la leeyahiin".
Laakiin heyadda ayaa heynin xal kale oo lagu hubin karo si aan lacag loogu dirin argagaxiso si ay meesheeda uga sii socoto lacagaha ay dadka u diraan qaraabadooda ku nool waddamada ay ka mid tahay Soomaaliya. Waxeyse hey'adda sheegtay in arrinkan ay xukumadda u gudbiyeen si wax looga qabto. Hey'adda ayaa sidoo kale sheegtay in dhawaan u xilsaari doonaan Försvarhögskolan si uu baaritaan ugu sameeyo lacagaha ay soogalootiga dib ugu diraan waddamadoodii, tallooyin xal noqon karana uga keenaan.